News 18 Nepal || प्रेमी पाउन ४ चोटी भागिन् प्रेमिका, प्रहरी चौकीमै प्रियंकाले गरिन् धुमधाम बिहे !
प्रेमी पाउन ४ चोटी भागिन् प्रेमिका, प्रहरी चौकीमै प्रियंकाले गरिन् धुमधाम बिहे !
एजेन्सी । मान्छेले प्रेमका लागि कतिसम्म गर्छन् भन्ने उदाहरण भारतको बिहारस्थित रोहतास जिल्लाको डेहरी क्षेत्रमा देखिएको छ । विवाह गर्न प्रेमीप्रेमिकाहरू मन्दिरमा जाने गरेको सुनिन्थ्यो तर भारतमा प्रहरी चौकीमा विवाह भएको घटना बाहिरिएको छ । घरपरिवारले राजी नभएपछि प्रेमीप्रेमिका जोडीले स्थानीय प्रहरी चौकीमा धुमधामसँग बिहे गरेका छन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार टंडवा गाउँका प्रेमी अभयकान्त र पडुहार गाउँकी प्रेमिका प्रियंकाबीच बच्चैदेखिको प्रेम सम्बन्ध प्रहरी चौकीमा विवाहमा परिणत भएको महिला थानाध्यक्ष माधुरी कुमारीले बताइन् । थानाध्यक्षकै संरक्षणमा दुवै प्रेमीप्रेमिकाको धुमधामसँग बिहे भएको जनाइएको छ ।
थानामै हिन्दू संस्कार अनुसार ब्राह्मणबाट मन्त्रोच्चारण र दुलहीको सिउँदोमा सिन्दुर भरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । घरपरिवारले प्रेम सम्बन्धमा अवरोध गरेको उजुरी प्रेमिकाले दिएपछि थानाध्यक्षले आफ्नै संरक्षणमा बिहे गराएकी हुन् । प्रेमिका प्रियंकाको निवेदनमाथि कारवाही गर्दा प्रेमी अभयकान्त विवाह गर्न राजी भएका थिए ।
विवाहमा प्रेमी र प्रेमिकाका भाइ भने सहभागी थिए । दुवै प्रेमीको विवाह गराउन परिवारजन सहमत थिएनन् । विवाहका लागि प्रेमिका आफ्नो घरबाट ४ चोटी भागिसकेकी थिइन् । भागेर गएपनि फेरि परिवारजनले खोजेर घरमै ल्याउने गरेका थिए । केही सीप नचलेपछि प्रियंकाले प्रहरी चौकीमै बिहे गरेकी हुन् ।
प्रहरी चौकीमै भएको विवाहको स्थानीय स्तरमा चर्चा भइरहेको छ । प्रहरी चौकीमा रहेका सबै प्रहरी कर्मचारीले विवाहित जोडीलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् ।
यस्तो शहर जहाँ १६ रुपैयाँमा पाइन्छ गर्लफ्रेन्ड
जहाँ बिहे अगाडि नै हनिमुन मनाइन्छ
जब मानिसहरु नांगिएर साइकल यात्रामा निस्किए (फोटोफिचर)
१० हप्तामा कोरोनाका तीनथरी खोपका पाँच डोज लगाएपछि..
गरिबहरुको बाध्यता : फाटेको जिन्स कसरी बन्यो आधुनिक पुस्ताको फेसन ?